Liis sir ah: Kenya 'oo dalkeeda ka mamnuuceysa siyaasiyiin badan oo Soomaali ah' - BBC News Somali
Liis sir ah: Kenya 'oo dalkeeda ka mamnuuceysa siyaasiyiin badan oo Soomaali ah'
4 Juunyo 2019
Lahaanshaha sawirka THE STAR KENYA
Image caption Xiisadda diblomaasiyadeed ee labada waddan ayaa hadda u muuqata mid meeshii ugu sarreysay gaadhay
Dowladda Kenya ayaa diyaarisay liis ay ku qoran yihiin magacyada 66 sarkaal oo Soomaali ah, kuwaasoo ay ka mamnuuci doonto inay soo galaan dalkeeda.
Tallaabadan ayaa noqoneysa tii ugu dambeysay ee salka ku heysa muranka labada dal u dhaxeeya ee ku saabsan xuduudda badda, sida ay ku warrameen qaar kamid ah warbaahinta maxalliga ah ee Kenya.
Warqado diblomaasiyadeed oo uu arkay wargeyska The Standard ayaa muujinaya in Kenya ay dhiseyso xayndaab, kaasoo ay ku eedeysay Soomaaliya inay ugu xad gudbeyso "si joogto ah".
Magacyada ku jira liiskan sirta ah ayuu wargeysku sheegay inay ka mid yihiin wasiir ka tirsan xukuumada Soomaaliya, ra'iisul wasaare hore, xubin ka tirsan baarlamaanka, ku xigeenka madaxa sirdoonka ee Soomaaliya iyo milkiileyaasha shirkad isgaarsiineed.
"Kenya muranka Soomaaliya kala dhaxeeya waxba nagama galin laakiin annaga yeysan nagu xadgudbin"
Dagaalka Twitter-ka: "Soomaaliya yaa wax u sheega"
Wargeyska Daily Nation: Kenya waa inay xoog u adeegsataa muranka xuduudda badda ee Soomaaliya
Muwaadiniin reer Kenya ah oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, kana dhashay qabiilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sidoo kale ku jira liiska, sida uu wargeysku xusay.
Bishii lasoo dhaafay, saddex siyaasi oo Soomaali ah ayaa loo diiday inay gudaha u galaan Kenya.
Sidoo kale waxaa dib loo soo celiyay xeerkii diyaaradaha Soomaaliya ka imaada ka hor istaagayay inay si toos ah uga soo dagaan garoonka caalamiga ah ee magaalada Nairobi, waxaana lagu amray inay ku hakadaan, laguna baaro magaalada Wajeer.
Bishii Maarso unbay ahayd markii ay Kenya iyo Soomaaliya dib u cusbooneysiiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed, ka dib markii uu soo kala dhex galay muran xoog leh oo la xiriira lahaanshaha xadka badda, halkaasoo hodan ku ah kheyraadka dabiiciga ah ee shidaalka.
Bishii Febraayo, safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya ayaa laga eryay waddanka, ka dib markii ay soo baxeen warar sheegayay in Soomaaliya ay beecisay shidaalka ku jira xadka badda ee lagu muransan yahay.
Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa beenisay inay iibineysay kheyraadkaas.
Horay ayey Soomaaliya dacwad arrintan la xiriirta ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda, taasoo wali laga dhursugayo inay soo saarto go'aanka kama dambeysta ah.
Taariikhda iyo xogta muranka 10 sano jirsaday ee badda kenya iyo Soomaaliya
Lahaanshaha sawirka Daily Nation
Image caption Labada waddan mid walba wuxuu sheeganayaa inuu leeyahay biyahan oo ku fadhiya dhul lagu qiyaasay 1,000km oo isku wareeg ah
Muranka Kenya iyo Soomaaliya ee xadka badda waxaa uu haatan socdaa ku dhawaad 10 sano, wuxuuna ku saleysan yahay sida loo cabbirayo xadka badweynta Hindiya ee labada dhinac.
Tallaabada Kenya ma tahay mid Soomaaliya lagu cadaadinayo in wada xaajood lagu xalliyo muranka badda?
Fasiraad ku aadan waxa salka ay ku heyso xiisadda diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo meeshii ugu xumeyd gaaray
Lahaanshaha sawirka ICJ
Image caption Khariidadda muranka badda Kenya iyo Soomaalia
Haddaba halkan ka akhriso taariikhda muranka badda Kenya iyo Soomaaliya:
April 7, 2009:- Dowladdii Kumeel Gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Kenya ayaa kala saxiixday heshiis Isfahan ah oo la xiriiray Qalfoof-badeedka.
Qalfoof-badeed waa barta ay ku kulmaan labada bad ee dalalka.
Heshiiskaasi waxaa dinaca Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxman Cabdishakur, oo xilligaasi ahaa wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah.
Dhanka Kenya waxaa u saxiixay Moses Wetangula, oo markaasi ahaa wasiirka arrimaha dibedda ee Kenya.
Heshiiskaas kuma jirin arrinta la xiriirta xadka badda, balse wuxuu dhigayay hanaankii loo mari lahaa in lagu xalliyo khilaafka xadka badda ee laba dal u dhexeeya.
August 1, 2009:- Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer ka dib, aqlabiyad ballaaran ugu codeeyay in la laalo heshiiska isafgaradka ahaa ee dhex maray Soomaaliya iyo Kenya.
Kulan aan caadiga ahayn oo ay yeesheen ayay Baaramaanka gebi ahaanba ku diideen in xitaa doodad ku saabsan arrintan dib loo dhigo, oo wasiirka arrintan khuseyso la siiyo fursad oo ku faahfaahiyo heshiiska.
July 13, 2015:- Sannad ka dib markii ay ku war galisay maxkamadda iney dacwad u soo waddo, Soomaaliya ayaa rasmi ahaan kiiska badda u geysay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ICJ.
Xeerilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali oo BBC-da la hadlayay xilligaasi ayaa sheegay in arrintan ay go'aankeeda gaari karto oo keliya maxkamaddaasi, halka Xeerilaaliyaha Guud ee Kenya ee xilligaasi Githu Muigai uu isagana BBC-da u sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiskan ay geyso maxkamaddaas.
December 18, 2017:- Kenya ayaa xareysay jawaabta ay ka bixineysay kiiska ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ.
Xeerilaaliyaha Guud ee Kenya wuxuu ku dooday in maxkamadda aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto kiiskan. Wuxuu codsaday in arrintan ay labada dal ku xalliyaan wadahadal.
Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda bixisay jawaabteeda ku aaddan codsigii Kenya ay maxkamadda uga dalbatay in arrintan dibedda maxkamadda lagu xalliyo.
Xeerilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa ku adkeystay in Soomaaliya ay u aragto in maxkamadda ay tahay goobta keliya ee lagu kala bixi karo. Waxayna xukuumaddiisa diidday dooddii Kenya ee ahayd in labada dhinac ay gaareen heshiis Isfahan oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah, kaas oo ay tahay in Soomaaliya ay xushmeyso.
Soomaaliya ayaa ku doodday in heshiiskaasi uusan sharci ahayn maadaamma uu diiday baarlamaankii Soomaaliya ee xilligaas.
Feb 02, 2018:- Maxkamadda Cadaaladda ee Qaramada Midoobay ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Xaakimiinta Maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska ka dib markii ay ka hadleen sharci ahaanta doodda Soomaaliya iyo diidmada Kenya.
Hase ahaatee, maxkamaddu weli ma aysan qaban taariikhda la dhegeysan doono dacwadda.
Feb 07, 2019:- Soomaaliya ayaa waxay London ku qabatay shir ay ku sheegtay inuu suuq-geyn u ahaa shidaalka Soomaaliya.
Wasiirka betroolka ee Soomaaliya, Cabdirashid Maxamad Axmed, oo BBC-da u warramayay ayaa sheegay in goobaha sahminta laga sameeyay ay ku jirto qeybta badweynta Hindiya ee Kenya iyo Soomaaliya ay ku muransan yihiin, isagoo sheegay in Soomaaliya ay leedahay go'aanka la xiriira arrintaasi, inta ay maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ay ka soo saareyso go'aankeeda ku aadan murankaasi.
Feb 16, 2019:- Kenya waxay la soo noqotay safiirkeedii Soomaaliya, waxayna ka codsatay safiirka Soomaaliya ee Kenya inuu dalkiisa ku laabto.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Kenya ayaa sheegtay in shirkii shidaalka Soomaaliya ee Lonodn lagu xaraashay "hantida shacabka reer Kenya," taas oo ay sheegeen inay tahay tallaabo aan loo dulqaadan karin.
Feb 17, 2019:- Danjiraha Soomaaliya ee ku sugnaa Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho, kadib markii lagu amray inuu dalkiisa aado.